मलेशिया अनि दुबई अब पुरा हुने भोअशोकको सपना , हेर्नुहोस भिडियो यस्तो आयो !! « OsNepal News
मलेशिया अनि दुबई अब पुरा हुने भोअशोकको सपना , हेर्नुहोस भिडियो यस्तो आयो !!
काठमाडौँ। भाइरल ब्वाए अशोक दर्जी पुनः काठमाडौं आइपुगेका छन् । आज भोली दर्जीको दिनचर्चा फेरिएको छ। गीत ‘मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन’को अपार सफलतापछि बालगायक अशोक दर्जीको चर्चा चारै तिर छ। उनी अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा स्टेज कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन्।
झापामा घर बनाउँदै गरेका अशोक आफ्नो पासपोर्ट बनाउनका लागी काठमाडौं आएका हुन् । १० दिन अघि झापा पुगेका गायक तथा संगीतकार टंक बुढाथोकीसँगै अशोक झापाबाट काठमाडौं आएका हुन् । सम्पुर्ण कागजात मिलाइसकिएको र यही जुन १४ गते मलेशियामा जाने टंकले जानकारी दिए ।
टंक र अशोक कार्यक्रमका लागी केही समयपछि मलेसिया जाने तयारीमा छन् । बिभिन्न देशबाट अशोकको प्रस्तुतीका लागी कार्यक्रम आयोजकहरूले अफर गरिरहनुभएको टंकको भनाई छ । पछिल्लो समय अशोकले पढाईमा पनि ध्यान दिन थालेका छन्
किशोरीको बयान: यौन सम्पर्कका लागि तयार नभए बा, आमा र दाईलाई समेत मार्दिन्छु भन्थ्यो
पोखरा । पोखराको वडा नं १५ कि एक किशोरीले आँफूमाथि विभिन्न बहानामा धम्क्याउँदै बारम्बार बलात्कार
कालिकोटमा रास्कोट अस्पताल बनाउने रबि लामिछानेको अभियानमा यो गीतले लाखौ नेपालीहरुको मन मुटु छुदै (हृदयविदारक भिडियो)
युके, भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको लुटतन्त्र र ठगि, अनियमिता र समाजमा देखिएको कुरुति, कुसंस्कार तथा वैदेशिक
निर्मला पन्तको हत्याको बिषयमा श्रीकृष्ण लुइँटेल (बोकेदारी) ले दिए कसैले नसोचेको यस्तो कडा जबाफ (भिडियो सहित)
दमक झापा। नेपालको सांगीतिक क्षेत्र दिनानु दिन परिबर्तन शैलीमा राम्रो बन्दै गइरहेको छ । गायक ,गायिका
कठै बाबा र मामु त आफ्नो डेढ वर्षको छोरा बचाएर हिटरमा जले ,छिमेकीहरु गुहर सुनेर पनि गएनन् छोरा को बिजोग् हुने भयो [भिडियो हेर्नुहोस ]
जाडोमा हिटर ताप्न जति आनन्द आउँछ, यससँग उत्तिकै सावधानी पनि आवश्यक छ । यही हिटरले
भारी हिमपातका कारण पोलियो खोप अभियान प्रभावित
बिजुली चुहावट भई झापाका दुई स्थानमा भिषण आगलागी : साढे एघार लाखको क्षति
सजिलो छैन मलेसियामा काम गर्न, मलेसिया गएका २० वर्षीय नेपाली युवकले गुमाए अकालमा ज्यान
लडाकु शिविरमा अनियमितता : प्रचण्ड र बहालवाला मन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धाको तयारी